Umuntu ngamunye efuna ukuqinisekisa izimo ukhululekile ukuphila. Kodwa nje ngoba imali ngeke awela ephaketheni zethu. Ukuze abenze, udinga ukuba azinikezele umsebenzi wakhe, ukuthuthukisa kanye zikhule, ukuya phezulu isitebhisi umsebenzi.
Umsebenzi futhi careerism ohlelweni of ubudlelwano ibhizinisi, kwencazelo
Uyini umsebenzi? Kwadingidwa esihlokweni umqondo kanye nezinhlobo career ukukwazisa ukuthi umuntu ukhuthazwa, futhi ngosizo okuyinto ungakwazi ukwandisa ijubane ukukhula umsebenzi.
Umsebenzi - hhayi nje uhlobo imisebenzi womuntu, ukukhuthazwa yayo ensimini professional, kodwa futhi impumelelo ezinye imigomo, ekuqhubekeleni phambili kwezindaba zomphakathi. Ngezinye izikhathi kule umqondo zihlanganisa kungenzeka izinguquko esizayo umsebenzi ezenzeka ngokuhamba kwesikhathi ngenxa yokufuna isipiliyoni.
Careerism wabhekisela sokuthuthukisa zikuphi sphere professional, ukuthuthukisa ukukhula umsebenzi. Ngezinye izikhathi zibizwa ngokuthi careerists abantu 'abaqhubeka Phezu kwamakhanda ", okungukuthi, ungacabangi imizwa olwamukelwa amazinga zokuziphatha, ukugqashula izibopho zemikhaya. Careerists ukubona umgomo wabo futhi iya kuyo, kungakhathaliseki ukuthi. Ngakolunye uhlangothi, efanele ephawula indoda - wanquma, enesibindi, wemfanelo. Ngakolunye uhlangothi, lo muntu kunzima futhi akuqinisekile, ngenxa imivuzo yezimali kanye umsebenzi intuthuko, uzimisele ukudela okuthile okuyigugu. Kodwa uma ngaphambi elithi "umgibeli social" eBhayibhelini zinomqondo ongathandeki, manje into efanayo ngokuphindaphindiwe amazwi athi "wokuvelela", "ukuphepha", "Inani umphakathi."
Beka umsebenzi ezimpilweni zabantu
Ezimakethe umnotho yesimanje, isinyathelo esibalulekile Umbuso ngamunye, amakhono namandla akhe. Ngakho-ke, ukuya phezulu umuntu kumele akwazi ukudalula ngokugcwele izinga lakhe ensimini okhokhelwayo. Ngeshwa, lokhu akulula. Nokho wonke umsebenzi ufuna ukuba uphumelele, ngoba ososayensi aphendule ekufuneni umphakathi, funda izinhlobo kanye izigaba umsebenzi, ukwaba ngeengaba ezahlukene nemibono.
Umsebenzi nge timvo letehlukene
Donald super, isazi sesayensi esidumile kakhulu, ababefunda zokuthuthukisa umsebenzi kanye izenzakalo esihambisana naleli bhokisi, ukholelwa ukuthi umsebenzi wakhe - iqoqo zonke izindima social eyadlalwa ngabanye kukho konke ukuphila. Impumelelo emsebenzini wakhe, ngokombono wakhe, kuxhomeke "self-umqondo" - izethulo zabo lomuntu ngaye.
Donald super kubhekwa into ezinjengomsebenzi, i-career kanye nezinhlobo ezahlukene izikhundla:
kwezomnotho umsebenzi Ukuzimisela yokuma elalihlala lomuntu isigaba sabefundisi ubudlelwane kwezomnotho;
sociologically umsebenzi - ukulandelana izindima umuntu womphakathi, obonisa ukuhamba lomuntu oyedwa, lithathelwe yayo ngemibandela ethile;
umsebenzi nasengqondweni uchungechunge izindima ngabanye angakwazi ukudlala eceleni komunye nomunye, kodwa futhi ubhekana kahle nabo ngenkathi idlala.
Hollande ukuthi umsebenzi wakhe kuwumphumela ukunyakaza umuntu isikhundla eyodwa kuya kwenye kule nkampani.
Ukuqina uveza ukuthi lesi simo esibonakala hhayi izenzo womuntu yokuthuthukisa isikhundla kule nkampani kanye iphuzu ngabanye umbono, ukuziphatha ezifanele.
Izinhlobo imisebenzi izinhlangano
Nanoma yimuphi umsebenzi uzibekele imigomo ethize esikhundleni imisebenzi babo bomsebenzi. Abanye umsebenzi kuphela inkokhelo, nezinye ezibalulekile self-ukuthuthukiswa, kanye nabanye abafisa ukuthuthukisa futhi ukhuthaze ukukhula zochwepheshe abanye, kanye uthola iholo ohloniphekile umsebenzi wabo. Iyiphi injongo ngaphakathi inkampani ethize kuchazwa ngokuthi ibhizinisi umsebenzi.
Kukhona ezinye izinhlobo zebhizinisi umsebenzi:
Ngaphakathi inhlangano - ukuhamba ngamunye ngaphakathi emsebenzini othize. It sihamba ngezindlela ezihlukahlukene: evundlile, amile centripetal.
Phakathi izinhlangano oyedwa kuyalinqoba ngezigaba ezahlukene: imfundo, umsebenzi reception, ukuba siqhubekele phambili endleleni ubuthishela, ubuhlengikazi ngokuqondene engu umhlalaphansi.
amathuba okuba umculi okhokhelwayo, uhlukanisa ku ezikhethekile futhi okungezona ezikhethekile. Esokuqala siwukuthi isisebenzi ngabanye unqoba zonke izigaba nge-career kwi- mkhakha. Esikhathini umuntu wesibili eshintsha imisebenzi enhlanganweni ukuba wenze isinqumo sakhe ngawo kuzo zonke izinhlangothi.
Kuqondile, ehlanganisa ekugqugquzeleni isitebhisi umsebenzi.
Evundlile, lokusho izinguquko kaningi izithakazelo professional kanye nemisebenzi, noma ukuthola isikhundla unomphela ngaphandle sabaphathi.
Centripetal, lapho abantu kancane kancane esondela ukuba agxilise amandla inkampani.
Amafomu leli qiniso kusukela iphuzu ngokwengqondo buka,
Odokotela bengqondo ukuchaza lezi zinhlobo ezilandelayo career:
isimo - okungazelelwe, akuncikile izenzakalo womuntu ukuthi ukushintsha inkambo umsebenzi wakhe;
"Kusukela ekhanda" - futhi buyinto ngephutha, okuyinto ethatha esebenzayo ingxenye Umhlahlandlela;
"Ukuthuthukiswa into", lapho amaholo-isisebenzi yena engazi ukushintsha ikusasa lawo asathuthuka inkampani wonkana;
ngesandla umsebenzi - umsebenzi asebenzayo futhi ngempumelelo abantu aziholele nokwanda kokungabi okuthunyelwe;
"Eminyakeni izidumbu," lapho umuntu uyakwazi kufezeke inhloso oyifunayo ukuze sinqobe izithiyo, bephethe abanye endleleni.
Umsebenzi, izinhlobo umsebenzi kanye ukusetshenziswa kwazo emisebenzini umsebenzi kungaholela emiphumeleni ehlukile kule plan okhokhelwayo.
Ziyini izigaba ezahlukahlukene umsebenzi ibhizinisi
Izinhlobo futhi izigaba nge-career kwi- ezivamile nomunye, ngoba akunakwenzeka ukuba ngokushesha sifinyelele ukudluliselwa komunye inhlangano kwenye, ukuthuthela izimo zokusebenza ezingcono, ukukhokhela kanye nesimiso. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthatha izinyathelo ezithile.
Buka kuqala - imfundo kanye neziqu olufanele iminyaka 25-28. Ngalesi sikhathi, lowo muntu ufuna ubizo lakhe noma into ozithandayo.
Ukwakhiwa - emakhono ezithile imisebenzi, ukuze bathole amakhono afanele kanye nolwazi. Kufika engu-30 ku-kumiswa ukuzimela kulesigaba Lesiphakeme.
Promotion - ukhulisa amakhono kanye nesipiliyoni. Okungenzeka neragelo phambili isikhundla esiphakeme umsebenzi. Umuntu njalo ukulwela ukuba benze umsebenzi oncomekayo futhi ukuthola isisindo enkulu emphakathini, oguqukayo career. Izinhlobo umsebenzi kulesigaba zinto zingase zicishe zifane. Lesi sigaba senzeka nensizwa ebalelwa eminyakeni engu 30-45.
Saving - sokuhlanganiswa isimo esikhona uyaqhubeka kuze kube iminyaka engama-60. Amakhono ayathuthuka ngenxa nesipiliyoni anqwabelene kanye nemfundo. Kusengenzeka ukukhuthazwa.
Ukugcwaliswa - eduze umhlalaphansi bayaphoqeleka ukuba bathole indoda entsha endaweni nokuqeqesha kuye. umsebenzi sendoda uphela emhlabeni yobudala 65.
Indlela umsebenzi wokuziphilisa omuhle
Kukhona 2 zindlela eziyisisekelo umsebenzi wokuziphilisa omuhle: inhloso kanye subjective. Okokuqala akubone ngesisekelo amanani amabili: ukukhuthazwa ngaphakathi enkampanini noma kulowo mkhakha kungakhathaliseki imingcele yenhlangano. I motion sabaphathi umsebenzi ngokwezindawo ibaluleke kakhulu ngoba indoda, ngoba lihlotshaniswa izinguquko inkokhelo futhi isikhundla emphakathini. zindlela subjective kunqunywa ngabanye efanayo. It eliqhathanisa impumelelo ngenhloso oyifunayo, ihlaziya esetshenziswa ukufeza izikhundla edingekayo kanye nohlobo izigaba umsebenzi, futhi ligxile iqembu kwezenhlalo futhi izimpawu zayo okuphumelela.
Umqondo "ukuphathwa umsebenzi"
Umsebenzi, umsebenzi izinhlobo, ukushintshashintsha ayo, izinyathelo kungenziwa ngokuthi i -career ukuphathwa. Lo mqondo kuchazwa njengoba umgomo-kulungiselelwa, indlela yokuhlelela isikhathi eside esizayo kanye nokuqapha ezingeni okhokhelwayo kanye izindlela zokuthuthuka, ukubaluleka amakhono abo futhi okusebenza. Ihlaziye izinhlobo ezinkulu career kanye izici ezithinta ke, ngesibonelo sikwazi ukubona izindlela ezintsha ukukhuthazwa.
Ukuphathwa Komsebenzi Ungase futhi zenzeka yinkampani, sisivumele ukwandisa izinga labasebenzi, futhi kungakho umkhiqizo ibhizinisi lonke.
Izimo letitsintsa ukugcwaliseka umsebenzi
Bangakwazi ngamaqembu amabili. Esikhathini isisebenzi kuqala izici siqu. Lokho ukuthi unesithakazelo yini eshukumisa umsebenzi oluncamelayo, kwandisa amathuba empumelelo. Kodwa ukuthola umsebenzi omuhle aluhambelani ukuntuleka ongagxilile neyokwesaba, ukuzibophezela, hhayi ukuma ukuze self-ukuthuthukiswa, kanye nokuhlola imvelo bangaphandle, isifiso kuphela ukuthola ezibonakalayo.
Isigaba sesibili sihlanganisa izici encike ubudlelwane phakathi komsebenzi kanye nenhlangano (amalungu aso). Lokhu kunomthelela kubantu abanawo ukuthuthukiswa komuntu emsebenzini futhi indlela umsebenzi wenkampani, umbono walo inkinga, ikakhulukazi.
Okukhethekile umshayeli ku ezindabeni zamazwe ngamazwe: imfundo, isitifiketi, incazelo umsebenzi kanye nomsebenzi
Amagilebhisi Annie. Incazelo, izici, ukukhiqizwa kabusha
Ukusonta ashintshekayo: iminyaka engu-125 ekhaya
Unogwaja Wild ngokwemvelo: incazelo, isithombe
WaseVenezuela umnotho: Uhlolojikelele nokuthuthukiswa
Ukupheka cider: iresiphi yokulungiselela i-apula iwayini
Benefit kanye nokulimala likabhiya